Fanafihana an-dalambe tetsy Isotry :: Tovolahy maty voatifitra teo amin’ny fony • AoRaha
Fanafihana an-dalambe tetsy Isotry Tovolahy maty voatifitra teo amin’ny fony
Nirefodrefotra ny poa-basy nataon’ ny andian- jiolahy, teny Andranomanalina Isotry, tamin’ny alin’ny zoma lasa teo. Maty tsy tra-drano voati­fitra teo amin’ny tratrany tandrify ny fony ny lehilahy iray, enina amby roapolo taona, nandeha teny an-dalambe. Voaroba ny vola iray tapitrisa ariary teny amin’ny namany niaraka taminy.
Mpivarotra ireto niharam-boina. Niara-dalana hamonjy fodiana eny Andranomana­lina ny lehilahy telo, mpiasa roa lahy sy ny mpampiasa azy ireo. Mety ho efa narahin’ ireo olon-dratsy sy efa fantatr’ izy ireo mialoha ny fisiana volabe eny amin’ireto mpiva­rotra ireto. Nitangoronan’ny lehilahy efatra nirongo basy izy telo lahy.
“Nanapoaka basy voalohany nanaparitahana ny olona teny amin’ny arabe sy teo amin’ny manodidina ireo jiolahy. Notifirin’izy ireo ny lehilahy iray, izay heverina fa mitondra ny volabe. Tsy nisy na inona na inona teny amin’io lehilahy io ka namba­nana basy ilay faharoa. Ity farany no nanome haingana ny vola teny aminy. Nieren-doza izy sy ny mpampiasa azy, izay niaraka taminy”, hoy ny polisy nanao ny angom-baovao teny an-toerana.
Nirifatra nandositra rehefa nahazo ny vola ireo mpana­fika. Niditra teo amin’ny tratrany ary nivoaka tao an-damosiny ny bala niantefa teny amin’ilay voatifitra.
Faritra mafana amin’ny tsy fandriampahalemana, toy ny fanendahana sy harom-paosy ary fanafihana mitam-pia­diana ny eny amin’iny faritra Andranomanalina iny, indrindra eo akaikin’ny tetezan’ny Bekiraro, izay nitrangan’ity asa ratsy, tamin’ny zoma ity.
“Faritra tena anaovana fisafoana eny amin’iny toerana iny. Efa mailo anefa ireo olon-dratsy ka amin’ny foto­ana fahavitan’ny fisafoana izy ireo vao manao ny asa ratsiny. Nahetsika avy hatrany ny polisy tato amin’ny kaomisaria. Nanampy tamin’ny fanenjehana ihany koa ny avy amin’ ny hery vonjy taitran’ny polisy, tamin’iny alina nisian’ny fandro­bana iny”, araka ny fanampim-panazavana avy eo anivon’ny Kaomisarian’ny polisy, eny Isotry. Olana ihany koa, hoy ha­trany ny polisy, ny tsy fanondroan’ireo olona eo amin’ny manodidina ny toerana sy ny lalana nizoran’ireo jiolahy mba hanamora ny fanenjehana.
Vono olona tany Andapa
Rongony tao anaty taksibe